SAADAAL: Khabiir Alan Shearer Oo Saadaaliyay Cida Ku Guulaysan Doonta Dagaalka Kaalmaha Saddexaad Iyo Afraad Ee Premeir League. - Gool24.Net
SAADAAL: Khabiir Alan Shearer Oo Saadaaliyay Cida Ku Guulaysan Doonta Dagaalka Kaalmaha Saddexaad Iyo Afraad Ee Premeir League.
Khabiirka kubbada cagta England ee Alan Shearer ayaa saadaaliyay kooxaha ku guulaysan doona dagaalka kaalmaha saddexaad iyo afraad ee Champions League loogu soo baxayo kaas oo ah tartanka ugu xoogan ee xili ciyaareedkan lagu kala baxayo kulamada baaqiga ah.
Manchester United ayaa xalay ku fashilantay in ay ka faa’iidaysato guuldarooyinkii Chelsea iyo Liecester city waxayna United baaqi ku sii ahaatay kaalinta shanaad inkasta oo ay kaalinta saddexaad la wareegi lahayd haddii ayna Southampton dhalin lahayn goolkii qalbi jabka ahaa ee xiliga danbe United laga dhaliyay.
Alan Shearer ayaa Man United u doortay kooxda ugu cad cad ee kaalmaha saddexaad ama afraad ku soo bixi doonta wuxuuna tilmaamay in qaab ciyaareedka ay ku jiraan uu ka caawin doono in ay Champions League ku soo laaban doonaan.
Dhinaca kale Alan Shearer ayaa tilmaamay in Chelsea ay noqon karto kooxda kale ee Man United kula soo bixi doonta afarta sare balse waxa uu shaki galiyay awooda Blues ee kulanka ay Liverpool marti u noqon doonto wuxuuna tilmaamay in United ay ka fursad fiican tahay marka kulamada lays barbar dhigo.
Alan Shearer oo saadaalinaya fursada Man United ee kaalinmaha saddexaad iyo afraad ee Champions league loogu soo baxayo ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in iyagu (Man United) ay ahaan doonaan kuwa ugu cad cad. Iyagu waa kooxda qaab ciyaareed ahaan ugu socota”.
Shearer oo ka hadlaya xaalada Man United ee barbarihii xalay ay la galeen Southampton iyo niyadjabka ay ka dareemayaan ayaa yidhi: “Anigu waan ogahay in ay ka soo niyadjabsanaayeen in ay dhibco lumiyeen, laakiin wali gacmahooda ayay ku jirtaa”.
Alan Shearer ayaa aaminsan in United ay wada guulaysan karto saddexda kulan ee baaqiga u ah oo ay afarta sare ku soo bixi doonto wuxuuna yidhi: “Way wada guulaysan dhamaan saddexda kulan, waxayna tagi doonaan afarta sare. Waxay haystaan ciyaartydii ay taas ku samayn lahaayeen”.
Dhinaca kale Alan Shearer oo ka hadlaya Chelsea ayaa yidhi: “Marka aad eegto Chelsea, waxaad damaanad qaadaysaa in ay saddexda dhibcood ka heli doonaan Norwich, laakiin fiiri ciyaartaas kadib waxay iyagu u tagayaan Liverpool oo ay marti ku yihiin, sidaa daraadeed kulamo ahaan, Man United ayaa ugu dhawaan haysata kulamada ka fiican”.
Man United waxay la ciyaari doontaa kooxaha Crystal Palace, Leicester City iyo Sheffield United laakiin Chelsea iyo Leicester City oo ah labada kooxood ee United dagaalka ugu wayn kula jira ayaa ilaa maalinta xili ciyaareedka ugu danbaysa loolanka sii wadi doona.
Haddaba akhriste, miyaad Alan Shearer ku raacsan tahay in Man United ay tahay kooxda ugu cad cad ee Chelsea ama Leicester City booska kala bixi doonta ee Champions league u soo bixi doonta?
Haa dhacn united fursada ugu fcn ayee heesataa